Lalao Android folo taona miaraka amin'ny lisitr'ireo 25 tsara indrindra | Androidsis
Efa ho folo taona izao no nitondrako an'ity Android ity ary lalao sy lalao folo taona no tapitra androany, ary ho tadidintsika amin'ireo lalao 25 ​​tsara indrindra amin'ity rafitra fiasa ity izay nitondra fifaliana lehibe ho antsika.
Azo antoka fa ny sasany amintsika dia hanadino, satria efa maro sy tena tsara, na dia tsy maintsy hamafisina aza fa na ho tsara na ho ratsy, dia freemium folo taona lasa izay. Na dia napetraka aza ny fototra ho an'ny lalao iray manontolo izay miandry antsika amin'ity fidirantsika ity. Ataovy.
1 voankazo Ninja
5 Dan ilay lehilahy
9 Fanjakana Rush
10 Alto's Oddisey
14 fifandonana Royale
16 mpandefa tsipìka
18 Lalao Dev Story
19 tsangambato Valley
21 Fallout fialofana
22 Zavamaniry vs Zombies
23 Aza mosarena: Fanontana Pocket
25 Tranomaizina Pixl
Saika azontsika lazaina izany Angry Birds dia iray amin'ireo lalao tsara indrindra tamin'ny taona voalohany avy amin'ny Android. Ny fampiasana ny rantsan-tànanao mba hamongorana voankazo miaraka amin'ny fitambaran'izy ireo dia traikefa tsaroana tato anatin'ity folo taona ity.
iray hafa amin'ireo lalao lehibe ho an'ny Android ary izany dia noho ny atiny ara-potoana navoakan'ny Halfbrick Studios, dia afaka niaina nandritra io folo taona io. Iray amin'ireo arcade tsara indrindra ananantsika amin'ny finday ary efa nandalo ny taonany.
Fizika zavatra Angry Birds tetika tapaka tamin'ny finday Ary ny fahitana ireo vorona kely ireo natsipin'ny antsamotady, ary koa ny fahitana ireo lampihazo nahavoa ny kapoka nataony, dia iray amin'ireo traikefa tsara indrindra nandritra ny folo taona; ary na dia amin'ny finday ambany aza.
Ny kinova finday dia mitentina Minecraft tonga miaraka amin'ny ankamaroan'ny kinova PC, saingy nahomby izy ireo. Azontsika atao ny mahatadidy fa ny beta izay nahitantsika sakana singa x ary niaraka tamin'ny fetrany dia nankafizinay ny fananganana hananana kinova iray mihoatra ny feno androany.
Dan ilay lehilahy
Uno amin'ireo sehatra arcade tsara indrindra izay ananantsika amin'ny findaintsika ary avy amin'ny mpamorona ny Fruit Ninja sy Jetpack Joyride ihany koa izany. Hitsambikina, endri-tsoratra isan-karazany, fahaiza-manao ady an-tsokosoko ary fahavalo maromaro ho an'ny arcade tena izy.
Dan The Man Fighting and Punching
Nisafidy ny PUBG Mobile izahay tamin'ilay karazana battle royale tamin'i Fortnite noho ny antony tsotra: noho ny hatsaran'ny fanatsarana azy mba hilalaovana amin'ny finday. Tencent Games dia nanao asa lehibe tamin'ny fitondrana antsika mpitifitra marobe an-tserasera hahafahantsika miaina amin'ireo mpilalao am-polony.
Ny iray amin'ireo seranan-tsambo misy fanafody ary efa tonga amin'ity taona ity hankafizanao ny simulator indie tsara indrindra ny toeram-pambolena ary antenainay tsy ho ela miaraka amin'ny fanavaozana vaovao. Pixel art amin'ny fotony rehetra amin'ny lalao premium tsy misy toy izany ary hitondra anao mandritra ny ora maro mahafinaritra.
Uno amin'ireo simulator fiara mahatsikaiky indrindra ary arcade iray manontolo izay nataonay ohatra ho an'ny fahatongavan'ireo atiny vaovao matetika. Mbola lalaovina tokoa izy io ary ny fijeriny ary ireo fiara rehetra azonao tratrarina, miampy ireo faribolana, dia nametraka azy io hatrany ho isan'ny nampidina azy indrindra.
Nanana fiarovana mimanda maro isika, saingy tsy misy toa ilay Kingdom Rush saga ary izany no quintessence an'ny karazana. Saripika mampiseho fampisehoana sy miloko be miaraka amin'ny fiolahana sarotra mba hitazomana anao mandra-pahavitanao ny sarintany sy ireto miaraka amin'ireo kintana telo.
Rush an'ny Fanjakana: Fiarovana amin'ny tilikambo
Ity lalao ity dia mahavita mandefa fotoana tsy manam-paharoa amin'ny andalana isan'andro ka hatramin'ny alina ary ireo hetsika meteorolojika ireo nakarina tao amin'ny solaitrabe. Izany rehetra izany dia nanjary amina fandriam-pahalemana sy traikefa tsy manam-paharoa hahazoana lavitra araka izay azo atao amin'ny alàlan'ny tontolo majika amin'ity lalao mahafinaritra ity.
Tsy azonao atao ny manilika ny lalao KING sy izany efa taloha sy taorian'ity sokajy ity. Nisy lalao am-polony izay naka tahaka ny filalaovana fampifangaroana zava-mamy mba hahazoana isa bebe kokoa sy fandrosoana amin'ireo ambaratonga an-jatony. Tsy manam-paharoa ao anatin'ny Puzzles sy ny mahazatra.
A RPG miaraka amina izao tontolo izao niteraka kisendrasendra ary izany dia mitondra anao hamaky izao tontolo izao futuristic izay hihaonanao amin'ireo critters tsy fahita firy. Tsy maintsy mitady azy ireo ianao amin'ity lalao tafita velona ity izay hametrahanao ny zavatra rehetra ilainao handroso. Lalao premium mendrika aloa.
Tonga ny seranan-tsambo PC taona lasa izay, saingy tamin'ity taona 2019 ity no nohavaozina araka ny tokony ho izy mba hampidirana fanaraha-maso natokana ho an'ny telefaona finday. Tsy misy fisalasalana iray amin'ireo lalao tsara indrindra manana amin'ny Android isika.
Clash Royale dia niditra an-tsokosoko tamin'ny Android tamin'ny fomba toy izany lasa iray amin'ireo lalao multiplayer an-tserasera 1v1 nilalao indrindra. Miaraka maodely freemium izay efa ohatra ho an'ny hafa ary miaraka amin'ireo boaty fandrobana hahazoana karatra bebe kokoa. Multiplayer marobe izay tokony handanianao ora maro.
Raha toa ka Stardew Valley no simika fambolena sy fiompiana simulator, afaka saika azontsika atao izany milaza ny mitovy amin'ny Hay Day ao amin'ny freemium. Lalao an-tserasera goavambe izay amoronanao ny toeram-pambolenao hamokarana vokatra izay amidinao tsara voaomana.
Ity taona ity dia ny fahatongavan'i iray amin'ireo arcade mahery indrindra amin'ny Android. Archero dia lalao tsy manam-paharoa misy fiolahana sarotra ary handany ora maro handrosoana amin'ireo ambaratonga maro ananany. Manana hery lehibe izy io ary ny fahaizana manokana ny fomba fiadin'ilay mpandefa zana-tsipìkantsika mba hampitomboana ny herin'ny fanafihana.
Iray amin'ireo Puzzles minimalista tsara indrindra ananantsika amin'ny Android ary izany dia toy ny lohateny premium tsara dia manana ny atiny rehetra amin'ny alàlan'ny fandoavam-bola tokana. Kilalao iray izay misambotra anao ka tsy mitsahatra mankafy mamorona ireo tambajotran-dalamby ambanivohitra ianao amin'ny findainao.
Lalao Dev Story
En ny fiandohan'ny Android ity lalao Kairosoft ity no tsara indrindra ary mbola iray amin'ireo ohatra tsara indrindra amin'ny atao hoe simulation izy io. Mamorona ekipa mpamorona anao manokana hamoronana lalao tsara indrindra ho an'ny karazana konsole rehetra. Tsy misy lalao toa izao.
iray hafa piozila mahafinaritra miaraka amina endrika sary miavaka hanampiana ilay mpandray anjara amin'ny alàlan'io geometry manokana an'ny Escher io. Lalao premium izay iray amin'ireo tsara indrindra tamin'ny folo taona.
Ny akoho niampita ny arabe dia iray amin'ireo traikefa tsara indrindra efa nandritra ny taona maro tao amin'ny Android izahay. Izy io aza dia efa nisy ny fandefasana lohahevitra niaraka tamin'ny tarehin-tsoratra Disney ary saika afaka milaza isika fa miatrika ny iray amin'ireo olona tsy dia mahay loatra.
Bethesda nidina tampoka teo amin'ny sehatra finday niaraka tamin'ny Fallout Shelter mahafinaritra ary izany fomba hametrahantsika ny tenantsika amin'ny fifehezana ny famoronana fialofana nokleary miorina amin'ny iray amin'ireo sagana tsara indrindra ao aminy. Tsy maintsy manamboatra efitrano ianao ary manampy ny mponin'izy ireo hivoaka any an-tany foana mba hahazo singa sy fiadiana tsara kokoa.
Zavamaniry vs Zombies
Iray amin'ireo lehibe hafa, ary na dia tsy teraka tao anatin'ity folo taona ity aza izy dia iray amin'ireo nilalao indrindra tamin'ny finday Android. Efa nanana fanontana faharoa izy io, na dia tsy misy mahatratra ny haavon'ny voalohany aza. Ny iray amin'ireo mahazatra mahazatra indrindra amin'ny findainao.
Zavamaniry vs. Zombies ™
Si buscas lalao velona saika noforonin'ny sain'i Tim Burton Manodidina ny tarehin-tsoratra maizina, Dont Starve no iray amin'ireo traikefa tsara indrindra azonao atao amin'ny findainao. Ny sary sy ny sary dia miavaka ary iray amin'ireo kilalao premium ireo izay andoavanao ny denaria tsirairay avy.
Este vorona niditra an-tsehatra tamin'ny finday anay taona vitsivitsy lasa izay ary nanjary iray amin'ireo lalao mampiankin-doha indrindra izany. Raha ny marina, ny mpamorona azy dia tsy nahalala akory ny fomba hitantanana ny fahombiazana nananany mba hanesorana azy tao amin'ny fivarotana fampiharana sy lalao video aza. Tsy misy finday raha tsy misy Flappy Bird ary ny sasany aza amidy manokana fotsiny miaraka amin'ny lalao nesorina tamin'ny tsena.
Ohatra tsara indrindra inona no idiran'ny mpikaroka tranomaizina loharano malalaka sy malalaka. Maimaimpoana ny zava-drehetra ary hanana fiainana iray monja ianao hihoarana ny haavony. Taona maro lasa izay dia iray amin'ny tsara indrindra amin'ny karazany izy ary maro ny kopia nivoaka, satria natolotry ny mpamorona ny kaody loharanom-pahalalana ho an'ny rehetra.
Y mamarana ny lisitra amin'ny iray amin'ireo lalao zava-misy nampitomboina izahay Nisy fiatraikany teo amin'ny sehatra sosialy izany. Ny valan-javaboary sy ny arabe dia feno mpilalao miaraka amin'ny findainy, ny fakantsariny ary ny GPS nohahetsika mba hisamborana an'i Pokémon.
Io no faritanay Lalao Android 25 tsara indrindra (+1 fanampiny) izay misy lohateny avo lenta maro tsy hita, fa mampiseho ny fivoaran'ny lalao amin'ny finday nanomboka tamin'ny 2010. Ankehitriny ndao hantenaina fa amin'ity taona 2020 ity ihany dia hiova ny zavatra amin'ny fahatongavan'ireo anaram-boninahitra lehibe toa ny Devoly tsy mety maty, Làlan'ny sesitany ary maro hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny lalao Android 25 tsara indrindra tamin'ny folo taona
Ny tsara indrindra dia ny NOVA 3
Lalao tena tsara, na dia nisy koa ny mpitifitra ambony kalitao. Ato amin'ity sokajy ity dia navelako tamin'ny PUBG Mobile izany rehetra izany.
Ny Realme 5i dia manamafy ny fahatongavany: 6 Janoary